Toerana fitsangatsanganana honeymoon tsara indrindra isaky ny sonia zodiaka amin'ny taona 2019
Home » Vaovaom-panambadiana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana » Toerana fitsangatsanganana honeymoon tsara indrindra isaky ny sonia zodiaka amin'ny taona 2019
Mitadiava toerana ho an'ny honeymoon tsara indrindra ho an'ny zodiakanao sonia amin'ny taona 2019 eto. Tsy tokony hisy fahasarotana amin'ny fitadiavana ny toerana mety raha tarihin'ireo kintana ianao.
Miaraka am-pieritreretana be rehefa mikasa ny volan-tantelinao; inona amin'ny teti-bola, maharitra hafiriana ny sisa ary mihoatra, ny manapa-kevitra amin'ny toerana marina dia mety hanelingelina. Diniho tsara ny fizahana ny bokintsika toeran-tantely isaky ny famantarana ny zodiaka ary avelao ny kintana hitarika anao amin'ny toerana mety indrindra amin'ny fialantsasatrao. Ny takelaka tsirairay dia manana ny toetrany manokana sy ny toetrany manokana, izay hahatonga ny toerana sasany ho mahafinaritra sy ny hafa. Noho izany, dia tokony ho hevitra tsara ny manoritra làlana ho any amin'ireo toerana mifanaraka aminao indrindra. Maninona raha jerenao izay ananantsika dia jereo raha mifanaraka ilay kiraro. Manolotra anao ny toerana tsara indrindra ho an'ny volan-tantely isaky ny sonia zodiaka amin'ny taona 2019.
Taurus (20 aprily - 20 mey) - Amalfi Coast, Italia
Taurus dia tia rendrarendra ary sambatra indrindra rehefa misedra fahafinaretana ara-nofo toy ny sakafo sy zava-pisotro matsiro. Izany no antony nahatonga an'io toerana io, izay manamorona morontsiraka 50km manamorona ny Saikinosy Sorrentine Italia, ho tonga lafatra ho an'ny famantarana nanjakan'i Venus. Tantaram-pitiavana mampihetsi-po, Taurus dia famantarana ihany koa amin'ny tany izay ny fifandraisany amin'ny natiora dia hahafahan'izy ireo mankafy ny làlana mahafinaritra sy ny fomba fijery avy amin'ny tanànan'ny seranan'i Salerno sy ny clavftop Sorrento. Votoatin'ny famongorana sy fijanonana amin'ny toerana iray mandritra ny fotoana lava mifanohitra amin'ny fitsangatsanganana an-tanàna, i Taurus dia hankafy amin'ity indray mandeha ity eo amin'ireo tanimboaloboka, villa lehibe ary ala-boasarimakirana. Misy ihany koa ny fitsangantsanganana an-tsambo mankany Capri sy Ischia ary koa fitsangatsanganana any amin'ny toerana toa an'i Pompeii sy ny Tendrombohitra Vesuvius na hahita ny katedraly mahavariana ao amin'ny kianja.
Ireo mpitsidika an'io toerana io dia afaka misafidy ny hijanona ao amin'ny Hotel Onda Verde izay eo amoron'ny morontsiraka sy Cliffside izay mankany amin'ny morontsirak'i Amalfi. Safidy iray hafa koa ny Hotel Fontana, miorina amoron-drano sy eo amin'ny toerana akaiky anao. Ny fotoana mety indrindra hitsidihana an'ity toerana fitadiavana volan-tantely rehetra ity dia amin'ny volana Mey rehefa tonga lafatra ny mari-pana dia vitsy ny mpizahatany, ary ambany ny vidiny.
Gemini (21 Mey - 20 Jona) - Barcelona, ​​Espana
Miaraka amina toetra roa mampientanentana dia ho raiki-pitia amin'ity tanàna ity i Gemini izay tsy matory velively izay ahafahan'izy ireo miaina tafahoatra isan-karazany amin'ny fotoana iray. Tsy misy haharitra ny dia lavitra mankaleo, ity fanahy ara-tsosialy sy mahasarika ity dia hankafy ny fiainana sy ny kolontsaina any Barcelona, ​​toerana iray misy safidy marobe ho an'ny fahafinaretana. Faly koa izy ireo mandany andro iray manantena amin'ny tsena eny amin'ny arabe mankany amin'ny valan-javaboary, ary avy eo ny tranombakoka mankany amin'ny morontsiraka, ary avy eo ny klioba alina.
Ny toerana tsara hipetrahana sasany dia ahitana ny Hotel SB Diagonal Zero, izay misy efitrano maoderina avo lenta, dobo panoramika vanim-potoana, fandroana Tiorka ary spa Finnish, ary na dia ny solarium aza eo an-tampon'ny trano fandraisam-bahiny. Eo ihany koa ny Atenas Catalonia izay manome fahitana mahatalanjona avy amin'ny dobo filomanosany an-tampon-trano ankoatry ny haitraitra kintana hafa. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny faran'ny volana martsa hatramin'ny aprily ary ny faran'ny volana septambra ka hatramin'ny oktobra rehefa milamina ny andro ary be ny fety.
Cancer (21 jona - 22 jolay) - Great Barrier Reef, Aostralia
Homebody mahafinaritra sy mampihetsi-po be dia be ny homamiadana ary mitandrina ary tsy dia tia mandray an-tanana ny zavatra tsy fantatra. Na izany aza, ny hevitra momba ny volan-tantely amin'ny toerana mahafinaritra eo amoron'ny rano dia mety hamoaka azy ireo ao anaty akorany fotsiny mba hialana sasatra sy hiala sasatra.
Ny homamiadana dia hahatsapa ho ao an-trano, mifandray amin'ny singa ao anaty rano ary mankafy ny haben'ny fiainana an-dranomasina ao amin'ny Great Barrier Reef, eo akaikin'ny morontsirak'i Queensland, avaratra atsinanan'i Aostralia. Betsaka ihany koa ny hetsika atao, toy ny; snorkeling, mitaingina sambo, antsitrika scuba, fitsangatsangana angidimby ary bebe kokoa ao anatin'ny tontolo iainana lehibe indrindra kilometatra kilometatra manodidina.
Ny toerana tsara hipetrahana mandritra ny volan-tantely eto dia misy, Coral Cove Resort izay nofaritana ho toy ny sandam-bola. 30 minitra avy eo amin'ny seranam-piaramanidina Bundaberg, ity toerana ity dia manome fomba fijery an-dranomasina sy golf mahafinaritra. Eo ihany koa ny Rosslyn Bay Resort Yeppoon izay tsy tazana ny Kemp Beach mitokana sy tsara tarehy. Ny trano fonenan'izy ireo manokana dia mety ihany koa ho an'ny mpivady mitady fiainana manokana. Tsara amin'ny filentika mandavantaona, ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny faran'ny volana Aogositra ka hatramin'ny voalohan'ny Desambra. Na izany aza, ny fahitana any amin'ny ranomasina haran-dranomasina dia tsara indrindra amin'ny Jona sy Septambra.
Leo (23 Jolay - 22 Aogositra) - Serengeti, Tanzania
Leo tsy azo odian-tsy hita tanteraka ny Leo sambatra sy mivoaka. Ny zotram-panahin'izy ireo amin'ny fiainana sy ny natiora sosialy dia miroborobo amin'ny fiheverana azony tsara. Ny volan-tantely tonga lafatra ho an'i Leo dia safariy afrikanina amin'ny toerana toa an'i Tanzania izay ifandraisan'izy ireo amin'ny sisin-taniny ary maka sary miaraka amin'ny anaram-boninahitr'izy ireo mitovy zodiaka sy mpanjaka. Ao amin'ny valan-javaboary Serengeti, afaka mankafy morontsiraka fasika ny mpitsidika, manidina amin'ny balaonina mafana, mijery ny fifindra-monina wildebeest, mandeha amin'ny safaris hijerena ireo liona, elefanta ary koa miakatra ny tendrombohitra Kilimanjaro.
Misy ny trano fonenana mahafinaritra eto, dia ny Serengeti Wildebeest Camp any Banagi, ary ny nature Nyaruswiga Serengeti mirehitra izay eo afovoan'ny Serengeti. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny faran'ny volana Jona ka hatramin'ny Oktobra rehefa mahafinaritra ny toetr'andro ary afaka mizaha ny tsara indrindra amin'ny fijerin'ny bibidia ianao.
Virgo (23 Aogositra - 22 Septambra) - Machu Picchu, Peroa
Ny virjina mahatsiravina sy mahatsapa fahasalamana miaraka amin'ny fitiavana ny fanohanana ny tany dia ho tia sy hankafy ny Loharana Masina macho Picchu, Peroa. Miaraka amin'ireo valan-javaboary tsara lalana an'ny lalan'ny Inca ary koa ny maritrano sy ny fambolena ao an-tanàna taloha, mora ny mahita ny antony hankafizan'ny virgo iray ny fitsangantsanganana sy ny fizahana ity toerana ity. Olona tena liana te hahafanta-javatra sy manam-pahaizana, ny virijina dia te hianatra momba sy hahita ireo zaridaina, tendrombohitra ary kijana marobe amin'ity toerana mahavariana ity.
Toerana mahafinaritra sasany hipetrahana eto dia ny Taypikala Machupicchu, miorina 250 m miala ny gara misy an'i Machu Picchu Train miaraka amin'ny kojakoja mahafinaritra sy maoderina. Eo ihany koa ny Casa del Sol Machupicchu, izay manolotra serivisy tena tsara, fomba fijery sy efitrano malalaka, 83,4 km miala ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Alejandro Velasco Astete. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Machu Picchu dia ny volana aprily hatramin'ny oktobra ho an'ny toetr'andro mahafinaritra ary na dia ny fomba fijery mahafinaritra aza.
Libra (23 septambra - 22 oktobra) - Paris, France
Fehezin'i Venus, ny planeta hatsarana sy fitiavana, libra koa dia manana fahatsapana ny rariny ara-tsosialy. Miankina amin'ny faharanitan-tsaina koa, ny libra dia azo antoka fa hanana fotoana marobe any Paris, Tanànan'ny Jiro. Tanàna iray manana kolontsaina, mozika ary zavakanto iray mibaribary tokoa dia hanaitra ny fahatsapan'ity famantarana mampihomehy ity. Sarotra ny mitady toeran-tantely mety kokoa.
Ny fitsidihana an'i Louvre, fitsangatsanganana am-pitiavana amoron'ny Seine tsara tarehy na ny Pont des Arts dia hahatonga ny minitra vitsy amin'ny fialantsasatra ho mahafinaritra fotsiny.
Ny toerana ipetrahan'ny Romantika dia ahitana ny Villa Alessandra voaravaka kanto, izay miorina amin'ny tokotanin'ny Mediteraneana sy akaikin'ny Arc de Triomphe. Misy koa Hôtel Plaza Étoile, miaraka amin'ireo trano misy azy ankehitriny ao anatin'ny manodidina azy ihany. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny volana aprily ka hatramin'ny jona ary oktobra hatramin'ny novambra rehefa vitsy ny vahoaka ary mahafinaritra ny andro.
Scorpio (23 Oktobra - 21 Novambra) - Los Angeles, Kalifornia
Ny maha-olona matoky tena sy matoky tena ary mahaliana azy ireo, dia mora ho an'ny scorpio ny mankaleo amin'ny toerana iray. Ary noho io antony io, iray amin'ireo toerana itadiavana volan-tantely tsara indrindra any Etazonia miaraka amina hetsika sy fitsangantsanganana marobe tsy manam-petra, dia mety indrindra amin'ity famantarana mamy nefa mahafinaritra ity indraindray. Ny scorpios dia mahatsiaro tena amin'ny fandaniany koa, ka angamba toerana iray tsy dia lavitra loatra ary mora vidy ihany koa no ho lavorary.
Izany no mahatonga an'i Los Angeles California, toerana misy saika ny zava-drehetra hatrany amoron-dranomasina ka hatrany amin'ny tendrombohitra, lohasaha sy ny tany misy lanezy, izay toerana mety indrindra ho an'ny volan-tantely. Miaraka amin'ny tanety isan-karazany sy ny natiora mahafinaritra, ny hazo palma, ny olo-malaza ary ny pataloha yoga, dia tsy afaka mitaraina noho ny fahasosorana ity famantarana feno fitiavana eto an-tany ity.
Ny trano fandraisam-bahiny mahafinaritra ao amin'io faritra io dia misy, ny Hollywood Roosevelt Hotel misy valiny be indrindra, izay manolotra ny efitrano fandraisam-bahiny sy efitra fandroana ho an'ny vahiny, eo amin'ny dobo filomanosana mafana sy haitraitra hafa. Misy ihany koa ny Sheraton Gateway Los Angeles misy efitrano maoderina sy toerana tsara. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i LA dia ny Martsa ka hatramin'ny Mey ary eo anelanelan'ny volana septambra sy novambra.
Sagittarius - Islandy
Ilay zodiac tena mahavariana indrindra, Sagittarius dia manome lanja ny fahafahan'izy ireo mihoatra ny zava-drehetra, ary mety manana hajia maromaro amin'ny pasipaorony izao. Sagittarius te hahafanta-javatra tsy manam-paharoa ary tia mianatra sy mikaroka. Izany no antony maha-Islandy, iray amin'ireo toerana tsy manam-paharoa tantely, dia tsara ho an'ity famantarana zodiak ity. Firenena manana toerana mahafinaritra sy mahavariana, tonga lafatra amin'ny hetsika ivelany toy ny fitsangatsangana sy ny fijerena trozona, ary amin'ny fotoana mety, fahitana ireo hazavan'ny Avaratra. Ity toerana ity dia manome an'i Sagittarius fitambaran'ny fahafaha-miala sasatra tanteraka aorian'ny fampakaram-bady sy fitsangatsanganana, ary koa hijerena sy hifalifaly rehefa misafidy izy ireo.
Mandritra ny fotoana lavitra dia azonao atao ny mandinika ny fijanonana ao amin'ny Storm Hotel by Keahotels miaraka amin'ireo efitranony tsara tarehy eo afovoan'ny Reykjavik. Eo ihany koa ny Hotel Gullfoss izay hita amin'ny Ony Hvita ary 3 km miala ny Riandranon'i Gullfoss fotsiny. Ny fotoana tsara hitsidihana azy ireo dia ny “Febroary, Martsa, septambra ary Oktobra ho an'ny fahitana eny an-tsambo voalohany ny jiro Avaratra.
Capricorn - Nosy Paka, amoron'ny moron'i Chile
Ity mari-pamantarana miasa mafy eto an-tany ity dia mila fotoana miala sasatra tokoa rehefa mahita ny fotoana fialan-tsasatra izy ireo. Ary noho izany ny toerana mitokana mitokana dia mety miasa tsara indrindra amin'ny Capricorn antsika. Izany no antony mahatonga ny Nosy Paka ao Chile, iray amin'ireo toho-tantely amoron-dranomasina tsara indrindra, mety ho toerana mety indrindra hampiala-tena, tsy hampidirina ary hamerenana indray. Na dia mankafy ny fotoanany irery aza izy ireo, ny Capricorn koa dia manana tanjaka mahatalanjona ary toy izany koa ho vonona hitety isaky ny santimetatra amin'ny nosy mandritra ny fialantsasatr'izy ireo. Betsaka ny zavatra azo atao any amin'ny Nosy Paka; manomboka amin'ny fitetezam-paritra na fialan-tsasatra amoron-dranomasina ka hatramin'ny filentehan'ny scuba na amin'ny alina. Ny mpitsidika koa dia mankafy mitsidika ny toerana arkeolojika Rano Raraku ary mahita ireo vato sy sarivongana malaza an'i Ahu Tongariki.
Ho an'ny fialantsasatra fialantsasatra dia azonao atao ny mandinika ny The Taha Tai any Hanga Roa. 5 minitra fotsiny avy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Mataveri dia misy bungalow sy dobo filomanosana voahodidin'ny zaridaina matevina sy mahafinaritra. Misy ihany koa ny Hotel Hangaroa Eco Village & Spa izay any Hanga Roa ihany koa ary manolotra fomba fijery mahafinaritra momba ny ranomasina miaraka amin'ny serivisy tena tsara. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia ny volana aprily ka hatramin'ny jona na oktobra hatramin'ny desambra rehefa antonony ny vidiny ary mitovy ihany ny toetr'andro.
Ny pisces be fangoraham-po sy mendri-pitokisana dia mety manonofinofy momba ny toerana feno tantaram-pitiavana tonga lafatra sy tantaram-pitiavana. Tsy ho lavitra hanatratra izany ary mety hivadika ho nofinofy ny nofy raha misafidy toerana toa an'i Hawaii ho an'ny volan-tanterany izy ireo. Ity no toerana mety indrindra amin'ny Pisces manonofy. Toerana ahafahan'izy ireo miaina ny sary an-tsaina mazava indrindra ary very mandritra ny ora maro amin'ny torapasika amam-pitiavana sy fitsangantsanganana hijerena amoron-dranomasina matevina. Mahafinaritra azy ireo ihany koa ny miala sasatra ao amin'ny efitranony sy mankafy ny fomba fijery mandritra ny tontolo andro, saingy misy ihany koa ny safidy fitsidihana volkano manaitra sy fanaovana fitsidihana angidimby hahitana fomba tsara kokoa.
Taorian'ny fampakaram-bady mahasosotra sy angamba tadio, ny Pisces dia nankafy ny fialan-tsasatra sy fialan-tsasatra tany Hawaii tsara tarehy. Safidy sasany toerana hipetrahana dia ny Kauai Beach Resort, any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Kauai, izay manolotra ny zava-drehetra ho an'ny vahiny manomboka amin'ny tubo mafana ka hatramin'ny riandrano ary mozika mivantana. Misy ihany koa ny Royal Kona Resort izay mipetraka amoron'ny Oseana Pasifika eo amin'ny Bay Bay. Amin'ny toetr'andro mahafinaritra mandritra ny taona dia zara raha misy fotoana ratsy hitsidihana an'i Hawaii; na izany aza, ny fotoana tsara indrindra dia ny aprily, mey, septambra ary oktobra.
Raha tsy azonao antoka ny toerana hamandrihana ny volan-tantelinao, dia eritrereto ny hanaraka ny kintana hahitanao ny sasany amin'ireo toerana tsara toerana misy ny volan-tantely, izay mifanaraka amin'ny soninao. Ny famantarana ny zodiakanao dia tsara amin'ny fandikana ny toetranao sy ny safidinao. Izany no antony maha-kompà mahafinaritra azy amin'ny fitadiavana ireo toerana fitadiavana volan-tantely tsara indrindra 2019. Na Sagittarius mpankafy anao na homamiadana homebody ianao dia azo antoka fa hahita zavatra mety aminao ihany.
Airbnb dia nanakiana ny fanoherana ny Semitism any Florida
The House of Originals: nanambara ny fandefasana marika hotely fandraisam-bahiny mihaja vaovao